Dare Rinonyima Nhengo dzeMDC Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Kubvumbi 06, 2009
Dare repamusoro soro reSupreme Court rarasa chikumbiro chenhengo mbiri dzeMDC dzinoti VaKisimusi Dhlamini naVaGandi Mudzingwa, pamwe nemutori wenhau, Shadreck Andreson Manyere, avo vachiri muhusungwa.
Vatatu ava vanga vaisa chkumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Mutungamiri wevatongi veSupreme Court, Chief Justice Godfrey Chidyausiku, vati hapana chakakanganiswa pamutongo wakapihwa nemutongi wedare reHigh Cour, Justice Yunus Ormajee, sezvo vatatu ava vari kunzi vakawanikwa vaine zvombo, izvo zvakaita kuti vapatsanurwe kubva kune vamwe vavo vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Vatatu ava vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva dzekuita zvehugandanga.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava, VaCharles Kwaramba, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio7 kuti vari kutarisira kuisazve chimwe chikumbiro kudare reHigh Court mumazuva ari kutevera, sezvo VaChidyausiku vasina kuvanyima mukana wekuita izvi.
Hurukuro naVaCharles Kwaramba